रिमिक्स गीत बन्द गरिनुपर्छ – श्यामप्रकाश तमोट (अन्तर्वार्ता) - Narayanionline.com
रिमिक्स गीत बन्द गरिनुपर्छ – श्यामप्रकाश तमोट (अन्तर्वार्ता)
गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ…” जनतालाई उठाउन गाइएको यो गीत नसुन्ने नेपाली को होला ? यसलगायत धेरै प्रगतिशील गीतले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएका छन् । यस गीतले पञ्चायतकालदेखि संसदीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न धेरै ऊर्जा दिएको थियो । यस्ता कालजयी गीतका गीतकार श्याम तमोटको नाम भने गीत जति चर्चामा आउन सकेको छैन ।
हाल नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्यामप्रकाश तमोटमा क्रान्तिकारिता मात्र होइन, सरलता र शालीनता उत्तिकै छ । उहाँको गीत नेपाललगायत विश्वका १७ भाषामा अनुवाद भएर विश्वभर क्रान्तिकारी जनताबीच गुञ्जिरहेको छ । उनै गीतका सर्जक तथा सङ्गीतकार तमोट केही वर्षअघिसम्म भोजपुरको दाँवाँमा एक साधारण शिक्षकका रुपमा जीवन व्यतीत गरिरहनुभएको थियो । पाँच वर्षदेखि मात्र काठमाडौँमा बस्दैआउनुभएका तमोटसँग राससका प्रमुख समाचारदाता तीर्थ भट्टराईले गर्नुभएको अन्तरङ्ग कुराकानीको सम्पादित अंश (तस्वीरः नवीन पौडेल)
मेरो जन्म भोजपुर जिल्लाको टक्सारमा २०११ असार १५ गते भएको हो । म नेवारी समुदायको व्यापारी परिवारमा जन्मेको हुँ । हामीले भोजपुरको दाँवाँमा कपडा, किराना पसल चलाएका थियौँ । मैले थाहा पाएदेखि नै हामी दाँवाँमा थियौ
पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो ? विवाह कोसँग र कहाँ भयो ?
यो गीत २०३५/३६ सालतिरै रामेश र मञ्जुलको स्वरमा रेकर्डिङ भए पनि पछि २०५४ सालमा ‘बलिदान’ फिल्मका लागि रामेश, रामकृष्ण ढकाल, ओम श्रेष्ठ र लासिमित राईको स्वरमा रेकर्डिड भएको हो ।
• प्रसिद्घि देशभर अझ विदेशमा पनि भए पनि किन राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएन ? के तपार्इँलाई सांसदको टिकट दिइएन ? या प्रयासै गर्नुभएन ?
•अहिले नेपाल स–गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, यस पदमा कसरी आइपुग्नुभयो ?
लोकतन्त्र स्थापनापछि मात्रात्मक रुपमा विकास प्रशस्तै भयो, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका कारण पनि परिमाणात्मक धेरै वृद्घि भयो । पहिले त एउटा रेडियो मात्र थियो, अहिले माध्यमको अभाव छैन । अहिले सङ्ख्या र विषयवस्तुको विविधीकरण भए पनि अझै प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । हिन्दी र अङ्ग्रेजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
• अहिले दोहोरी गीतहरु व्यापक भइरहेको सन्दर्भमा अन्य लोकगीतहरु खासगरी पूर्वीय भाकाहरु ओझेलमा परेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, ती गीतहरुको उत्थान हुन सक्छ कि सक्दैन ?
चितवनको राप्तीमा अटो दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
सरकारले देशभर ५० ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन बनाउने
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्ने थलो बनाउन हुँदैन – शिक्षामन्त्री पोखरेल